Hlela amaxwebhu e-PDF-Geofumadas
Hlela amaxwebhu e-PDF
NgoDisemba, 2009 ezintsha
Phakathi kwezinto ezininzi, kukho eyona ilungileyo kunye nexabiso eliphantsi yeFood Foit Mhleli. Ukukhanya kakhulu, phantse njengoku Foxit Reader, ilungele ukugqabaza ngoxwebhu olungenasiseko okanye uxanduva, njengokusebenza nendlu yokushicilela esebenzisa iAdobe Uyilo lwe-CS ye-Mac, kwaye ivelise i-pdf kuphela.
Ngokuphantse yabona nayiphi na into, umfanekiso, umzobo kunye nemeko yezicatshulwa, amaqela ngokwamagama athe tyaba ngokwahlula izitayile xa ukhetha.
Kule meko, ndifuna ukwenza uqaphele kuxwebhu lwamagama lwangaphandle olunenkcazo eneenkcukacha, into endiyenzayo emva koko kukutshintsha kuphela komxholo ukuze uhlelwe kolunye umbala okanye wenze amanani achazayo.
Ukongeza, inezixhobo ezinomdla zale njongo, ezinjengokuhlulahlula amaqela, ukungafumani iqela kwaye ukhethe icandelo ongayitshintsha umbala, ubungakanani, ifonti yokungenisa, njl.
Imifanekiso kunye nemifanekiso
Imifanekiso emitsha ingongezwa, itshintshwe okanye ifakwe. Zombini imifanekiso kunye nezinto zinokujikelezwa ngokulandelelana kwee-90 degrees. Kwanombhalo. Iimilo ezisisiseko zibandakanya amaxande, ii-ellipses, imigca, iipolylines, ijikavethi kunye nezinto ezineethoni zomgangatho.
Nje ukuba utshintsho lwenziwe, iqhosha lokugcina ligcina utshintsho. Ukuba awunalayisenisi ehlawulelweyo, uphawu lwenziwa kwikona ethi luhlelwe kunye neFoxit PDF Editor.
Ayisiyongxaki, kukuyikhuphela, izame kwaye uqiniseke ukuba iyafuneka kwaye uyithengile. Phakathi kwemisebenzi enomdla kakhulu kukuba ungenise amaphepha kwelinye uxwebhu olubonisa uluhlu lwamaphepha nalapho sifuna ukuyifaka khona.
Apha unako Khuphela umhleli weFoxit PDFKwiphepha elifanayo ungabona ezinye izisombululo ezivela kwinkampani enye, kubandakanya nekhithi yophuhliso (SDK) kunye apho iifom zePD zinokwenziwa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Cofa, cofa, nqakraza
Post Next Iziganeko ezingalibalekiyo zonyakaOkulandelayo "